प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन्, राजीनामा नदिए हामी सर्वोच्चमा पस्न दिँदैनौं : डा. त्रिपाठी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन्, राजीनामा नदिए हामी सर्वोच्चमा पस्न दिँदैनौं : डा. त्रिपाठी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १६ कार्तिक । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसमम आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । उनले भने,‘जबसम्म उहाँले पद त्याग गर्नुहुन्न, तबसम्म यो आन्दोलन अब रोकिनेवाला छैन् । यो आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । सारा देशभरिका कानून व्यवसायीहरु उहाँको बहिर्गमनको पक्षमा छन् ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको उपस्थितिले यो पदलाई नै असम्माननीय बनाएको टिप्पणी गरे । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संस्थाको गरिमा नबढाएको आरोप लगाए ।
उनले न्यायाधीशहरुले नै प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सहकार्य नगर्ने भनिसकेको पनि सुनाए । उनले भने,‘उहाँले कमसेकम इजलास त बसाएर देखाउनुपर्यो नि । हामीले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलास बस्छ । उहाँले आफ्नो इजलास पनि तोक्नुभएन ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।
काठमाडौं, १९ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापाको पराजयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ
काठमाडौं, १९ मंसिर । सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरले पढाइभन्ने कुरा कहिले नसकिने भन्दै अब बाचुन्जेल
काठमाडौं, १९ मंसिर । सत्तारूढ नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का नेता होम बुढाथोकीले नेकपा (एमाले) को
काठमाडौं, १९ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य दयालबहादुर शाहीले आफ्नो
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ कल्पना धमलाले यो देशको वैचारिक नेतृत्व